Cilmi-kii baran hoonbarrooyinka iyaga ma weydiin kartaa su'aalo. Sidaas daraaddeed, cilmi hoomboro lagu khasbo in ay ka barato dhaqanka. Cilmi-kii baran dadka, dhinaca kale, waa in ay ka faa'idaystaan ​​xaqiiqda ah in ay ka qaybgalayaashu noo kala hadli kartaa. In dadka la waydiiyo su'aalo ayaa qayb muhiim ah oo cilmi bulsho muddo dheer, oo da'da digital labada awood iyo wuxuu u baahan yahay isbedel qaarkood in cilmi baadhitaan. Inkasta oo sawir isagoo sheegay in cilmi baadhitaan ay qaar ka mid ah hadda dareemayaa, waxaan filaynaa in da'da digital waxa uu noqon da'da dahab ah oo cilmi baadhitaan.
Taariikhda cilmi baadhitaan lagu qiyaastii qaybin karaa saddex waagii iskusoo noqnoqonaya, soocay laba gudbayo tartamay (Groves 2011; Converse 1987) . Hadda waxaan ku jirnaa marxalad kala guur ah oo u dhexeeya waagii labaad iyo saddexaad, laakiin ugu horeysay oo waagii-as labaad iyo sidoo kale kala guurka ah ee u dhexeeya iyaga-ka bixiyaan muuqaal hoose mustaqbalka cilmi baadhitaan.
Inta lagu guda jiro marxalad hore ee cilmi sahan, qiyaastii 1930 - 1960, horumar ah ee sampling sayniska iyo design su'aalaha si tartiib tartiib ah ay keentay in faham casriga ah ee cilmi baadhitaan. Xilligii hore ee cilmi sahan waxaa lagu gartaa meesha sampling ixtimaalka iyo wareysiyo fool-ka-fool ah.
Markaas, a horumarinta-ka sida- baahsan ee telefoonada landline ee hodanka ah farsamada dal-ugu danbeyn keentay in Zaman labaad ee cilmi baadhitaan. Tani Zaman labaad, qiyaastii ka 1960 - 2000, waxaa lagu gartaa garaacaysaa lambar random (RDD) sampling ixtimaalka iyo telefoonka waraysi. Isbedelka ka Zaman ugu horeeyay ee Zaman labaad keentay in koror weyn oo hufnaan iyo hoos u qiimaha. cilmi badan ayaa u arka this Zaman labaad sida da'da dahab ah oo cilmi baadhitaan.
Haddaba, horumarinta-ka kale farsamada digital da'da-doonaa ugu danbeyn noo keenaan marxalad saddexaad ee cilmi baadhitaan. guurka Tan waxaa loo wado labada riix oo jiid arrimood. In qayb, cilmi lagu qasbay inay bedesho sababtoo ah waji ka Zaman labaad waxaa la dumin doono da'da digital (Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Tusaale ahaan, guryaha iyo aad u badan oo aan haysan telefoonka dhulka iyo non-jawaab heerka-jawaabeyaasha kuwaas oo wa- raystay laakiin ha ka qayb qaataan sahan-ayaa sii kordhaya (Council 2013) . Wadajira ula burburka this of-Zaman labaad habab sampling iyo waraysiga, waxaa jira helitaanka sii kordhaysa oo ah ilaha xogta weyn (ka eeg Cutubka 2aad) u muuqata in ay halis gelin si uu u bedelo sahan. Waxa intaa dheer in arrimo riix kuwan, waxaa sidoo kale jiid arrimood: wajiyada Zaman saddexaad bixiyaan fursado cajiib ah, sida aan ku tusi doonaa cutubkan. Inkastoo wax aan gebi ahaan weli degeen, waxaan filaynaa in xilligii saddexaad ee cilmi baadhitaan lagu gartaa doonaa by sampling aan jaaniska iyo wareysiyo computer-maamusho. Dheeraad ah, inkastoo waagii hore waxaa lagu gartaa wajiyada ay u sampling iyo waraysiga, waxaan filaynaa in xilligii saddexaad ee cilmi sahan sidoo kale lagu gartaa doonaa by xirid ah ee sahan la ilaha xogta weyn (Shaxda 3.1).
Shaxda 3.1: Saddex waagii cilmi baadhitaan. Cutubkani waxa uu diiradda saari doonaa xilligii saddexaad ee cilmi baadhitaan: sampling non-itimaalka, wareysiyo computer-maamusho, iyo sahan ku xiran xogta kale.
Zaman First 1930 - 1960 Aagga sampling itimaalka Waji ka waji sahan istaag-keligiis
Zaman labaad 1960 - 2000 garaacaysaa lambar Random (RDD) sampling itimaalka Taleefanka sahan istaag-keligiis
Zaman saddexaad 2000 - ilaa waqtiga xaadirka sampling Non-itimaalka Computer-maamusho Sahamis lala xogta kale
guurka u dhexeeya waagii labaad iyo saddexaad ee cilmi sahan ma si buuxda oo siman, oo waxaa jiray doodo kulul oo ku saabsan sida cilmi waa sii wado. Raadinta dib on guurka ka dhexeeya waagii koowaad iyo labaad, waxaan u malaynayaa in ay jirto hal aragti muhiim ah inoo hadda: bilowgii ma aha dhamaadka. Taasi waa, hababka hore badan marxalad labaad ahaayeen ad hoc-iyo aad u wanaagsan ma u shaqeeyaan. Laakiin, iyada oo shaqo adag, cilmi xalin dhibaatooyinkan, iyo habab Zaman labaad ee ugu danbeyn ka fiican ka waji-Zaman ugu horeysay. Tusaale ahaan, cilmi la samaynaya telefoonka garaacaysaa lambar random sanado badan ka hor Mitofsky iyo Waksberg horumariyo hab random garaacaysaa lambar sampling lahaa guryaha ku ool ah iyo teori wanaagsan (Waksberg 1978; Brick and Tucker 2007) . Sidaas darteed, waa in aan isku qaldin xaaladda ay ku sugan waji-Zaman saddexaad la natiijooyinka ugu dambaysta ah. Taariikhda cilmi sahan caddeeyo in fiddo duurka jooga, kexeeyey by isbeddel ah ee technology iyo bulshada. Ma jirto si ay u joojiyaan horumar in. Saas ma aha, waa inaan adeegsannaa, oo ay sii xigmad ka waagii hore barbaro. Dhab ahaantii, waxaan aaminsanahay in da'da digital noqon doontaa da'da ugu xiiso weliba weydiinaya su'aalo dadka.
ka dhiman ee cutubka bilaabmin by dooday in ilaha xogta weyn ma bedeli doonaa sahan iyo in badan oo ah data-korodhka ma hoos-qiimaha of sahan (Qaybta 3.2). Marka la eego dhiirogelin in, waxaan soo koobaan doonaa qaab guud baadi sahanka (Qaybta 3.3) in loo soo sameeyay inta lagu guda jiro labada waagii hore ee cilmi baadhitaan. Qaabkan awood inoo siineysaa in la fahmo habab cusub oo ay wakiil-gaar ah, tijaabada aan jaaniska (Qaybta 3.4) ahaw habab cusub oo ay ku Cabbiraad-gaar ah, habab cusub oo weydiinaya su'aalo jawaabaha (Qaybta 3.5). Ugu dambayntii, waxaan ku tilmaami doonaa laba foom oo cilmi xiriirinaya xogta sahanka ilaha xogta weyn (Qaybta 3.6).